Miyay faa'iido u tahay warshadaha mashiinka wax lagu iibiyo? - TCN
Miyay faa'iido u tahay warshadaha mashiinka wax lagu iibiyo?
Waqtiga: 2019-12-13 Hits:
Iskuullada, saldhigyada dhulka hoostiisa mara, shineemooyinka iyo meelaha kale ee dadku ku badan yihiin, waxaan inta badan ku aragnaa mashiinnada wax lagu iibiyo oo ay ka buuxaan cunto fudud iyo cabitaanno. Haddii aad rabto inaad cuntid cunto fudud, waxaa ku dhow mashiin lagu iibiyo, waad heli kartaa isla markiiba. Markii aad dooranaysid alaabada, ha noqoto lacagta warqadda ama lacagta birta ah ama wax lacag bixin ah oo aan lacag lahayn, waxaad ku bixineysaa mid ka mid ah qaababkan lacag bixinta, ka dibna "jug", cabbitaannada ama cuntooyinka fudud ayaa hoos u dhacaya. Noocan dareenka casriga ah ee tikniyoolajiyadda, waxaa ka buuxa madadaalo isla markiiba. Marka, ma faa'iido baa in la sameeyo ganacsi iib ah?
Horumarka sayniska iyo tikniyoolajiyadda, mashiinnada wax lagu gado waxaa si isdaba joog ah u hela ganacsatada, taas oo ka dhigan isbeddellada isticmaalka. Lacag ma sameysaa? Haddii ay jiraan kumanaan dad ah oo maalin walba makiinad ag maraya, ilaa inta tobnaad ka mid ahi ay wax ka iibsanayaan, waa la qiyaasi karaa in dakhligiisu yahay mid la saadaalin karo. Soo iibso mashiinkaaga oo kaligaa ku shaqee, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad mas'uul ka ahaato buuxinta iyo dayactirka mashiinka iibka.
Mar kasta oo aad furto mashiinka wax lagu iibiyo, qof ayaa u imaan doona si uu u daawado si xiiso leh. Kaliya waxaad u dhigaysaa dhammaan cuntooyinka fudud iyo cabbitaannada si isku mid ah, oo iska hubi in qadaadiicda waraaqaha ay caadi tahay iyo in kale, oo aad wax walba u maamusho si habboon, ka dibna aad u hubiso hawlgalka caadiga ah ee mashiinka. Ma jiro hawl gacmeed, adeegga tafaariiqda ee aan lala socon ayaa si aad ah caan ugu noqday.
Xilliga internetka, lacag bixinta ayaa aad iyo aad ugu habboon, tikniyoolajiyaduna aad iyo aad ayey u ammaan badan tahay, mashiinnada wax lagu iibiyo ayaa matalaya isbeddellada isticmaalka waxayna ku jiraan qayb weyn oo ka mid ah suuqa tafaariiqda cusub!
HORECodsiga ugu weyn ee mashiinka lagu iibiyo
NEXT TCN-suuq caqli-gal ah, dallacsiin gaar ah dhammaadka sanadka